Shirkadda Microsoft ayaa ku dhawaaqday taageero cusub oo daruuri ah oo loogu talagalay portal Azure | ITS
Microsoft Corporation ayaa soo wargeliyay dariiqa cusub ee loo yaqaan 'Azure portal'
Macaashyada daruuriga ah guud ahaan waxay la socdaan labo xiriir oo dhexdhexaad ah. Waxaa jira interface interface elektaroonig ah ama interface interface khadka taleefanka. Sida caadiga ah macaamiishu waxay la wadaagaan labadaba wali dhexdhexaadin iyaga dhexdooda macnaheedu waa isweydaarsiga dhexdhexaadinta iyo dhexdhexaadinta terminal, iyo kiisaska qalabka qaarkood, waa wax aan macquul ahayn.
Waa hagaag sida ugu caansan ee blogka ugu dambeeyay ee Microsoft, qalabka wax soo saarka ayaa ka fakaray jawaab.
Cusbooneysiinta cusub ee Microsoft Azure Cloud Console waxay la socotaa geedi socod shaqo oo isku xiran, taas oo u ogolaato macaamiisha inay soo saaraan codsiyada ku saabsan Azure iyagoo isticmaalaya interface interface ama qalabka xariiqa kharashka. Xayawaanka waxaa lagu daraa bogga si ay macaamiishu si dhakhso ah ugu dhacaan ka qayb qaadashada xarriiqda call, halka isla markaa la arko hantida daruuriga ee shabakada garaafka.
Tani waxay wax ka qabataa arrimaha aasaasiga ah ee kor ku xusan waxayna siinaysaa macaamiisha fursad ay kula shaqeeyaan qalabyada sida noocyo kala duwan ama kiniin ama meelo aan la soo saarin qalabka feylasha.
Tani waxay keeneysaa in la abuuro koodh fudud oo aan fududeyn oo aan lagu beddelin.
Qaybaha ugu muhiimsan ee khibraddaani waa:
Ansaxinta barnaamijka ee qalabka loo yaqaan line order from your web page hadda
Dhamaan qalabyada line-upka Azure, iyo sidoo kale faa'iidooyinka khadka korontada ee horay loo soo bandhigay
Maareyn, shaqo joogto ah oo jelly aad code, naqshadeynta iyo dhaqdhaqaaqa iskutallaabta ka badan fadhiyada kabaha daruuraha.
"Terminalku waa kulan aad u muuqda oo ay ku jiraan aaladaha xarigga xajinta ee Azure, iyo sidoo kale tifaftireyaasha caadiga ah iyo aaladaha aad filayn lahayd. Horumarin, hannaanka mugdiga ah ee mugdiga ah ee adiga kugu habboon, "wuxuu isku daraa Brendan Burns, Iskaashiga Iskaashiga ee blogga. Intaa waxaa dheer, diiwaanka tashiilka ah ayaa lagu sii adkeynayaa dariiqa Casure ee ah sidaa daraadeed macaamiisha ayaa sii wadi kara meesha ay ka baxeen fadhiga xayawaanka soo socda. Shucuur ahaan, macaamiishu uma baahna inay ku jiraan qalab ama nidaam la mid ah si loo sii wado casharka.